हेमराजले पहिल्याए कमजोरी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
‘मलाईचाहिँ करिअरकै उत्कृष्ट फिल्म भन्ने लाग्छ,’ उनले व्यंग्य मिसाउँदै भने, ‘हिजो नराम्रो लागेका फिल्म चले, आज राम्रो लागेको फिल्म चलिरहेका छैनन् ।’ संयोग के भइदिएको छ भने हेमराजका तिनै हिट फिल्ममा अनमोल केसी थिए, बाँकी चार फिल्म फ्लप भए । सोही कारण उनीमाथि अनमोलबाहेक अरू लिएर फिल्म बनाउनै नसक्ने आरोप छ । अनमोलसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि देखाउनकै लागि ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ र ‘ब्रेकअप’ मा आशिरमान देशराजलाई अभिनय गराएको भन्ने पनि छन् । तर उनी आफैंलाई के लाग्छ ? भन्छन्, ‘अनमोल खेलेका फिल्म सफल भएको सत्य हो । अर्को सत्य के पनि हो भने हामीकहाँ कन्टेन्टभन्दा स्टार हेरेर फिल्म हेर्ने संस्कृति छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:४२
अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० ले पराजित गर्दै मछिन्द्र क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको नयाँ विजेता बनेको छ
काठमाडौँ — ए डिभिजन लिगमा डेब्यु गरेको तेस्रो वर्ष नै त्रिभुवन आर्मी क्लबले च्याम्पियन बन्ने अवसर पाएको थियो । आर्मीको अन्तिम खेल थियो विभागीय प्रतिद्वन्द्वी पुलिस क्लबविरुद्ध । अन्तिम खेलअघि आर्मी ६३ अंकसहित शीर्षस्थानमा थियो । १ अंक अन्तरमा थियो पुलिस । त्यसैले आर्मीलाई २०६३ सालको लिगमा च्याम्पियन बन्न पुलिसविरुद्ध बराबरी नतिजा पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, रमेश बुढाथोकीले दुई गोल गरेपछि आर्मीलाई स्तब्ध पार्दै पुलिस पहिलोपल्ट च्याम्पियन भयो । त्यसपछि पुलिसले ए डिभिजन लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक नै पूरा गर्‍यो । आर्मी भने ओरालो लाग्यो ।
नेपाली सेनाको टिम एक दशकपछि फेरि बलियो भएर आयो । लिगको उपाधिमै धावा बोल्यो । फेरि अन्तिम खेलमा आएर २०६३ कै जस्तो कथा दोहोरियो । अर्थात् आधुनिक लिगको उपाधि पहिलोपल्ट जित्ने आर्मीको सपना फेरि तुहियो । यसपालि आर्मी रोक्ने काम गर्‍यो मछिन्द्रले ।
दशकअघि जस्तै १ अंक अगाडि भएकाले आर्मीलाई दशरथ रंगशालामा शनिबार मछिन्द्रसँग जितमात्र होइन, बराबरी पनि उपाधि जित्न पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, खेलको कथाले अर्कै मोड लियो । पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्न मछिन्द्रलाई जितको विकल्प थिएन । त्यही लक्ष्य पूरा गर्दै मछिन्द्र नयाँ च्याम्पियन बन्यो ।
मैदानको मध्यभाग नजिकबाट रन्जित धिमालले प्रहार गरेको फ्रि–किकलाई रोक्ने प्रयासमा आर्मीका डिफेन्डर विकास तामाङले गरेको हेडरमा बलले जाली चुम्न पुग्यो र मछिन्द्र ३३ औं मिनेटमा १–० ले अगाडि बढ्यो । अन्ततः त्यही आत्मघाती गोल मछिन्द्रलाई २०११ सालमा सुरु भएको ‘ए’ डिभिजन लिगको १६ विजेता बनाउन पर्याप्त भयो । राजधानीस्थित मछिन्द्र बहालको ४७ वर्ष पुरानो यो क्लबले २०६२ सालदेखि शीर्ष श्रेणीको लिग खेल्न थालेको हो । हाल राष्ट्रिय टिम सम्हालेका स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिन प्रशिक्षक छँदा २०७० सालमा उपविजेता हुनु नै यसअघि उसको सबैभन्दा राम्रो नतिजा थियो ।
यो सिजनको लिगको अन्तिम अर्थात् ९१ औं खेल कुनै प्रतियोगिताको ‘फाइनल’ जस्तै बन्यो । एउटा रोमाञ्चक फाइनलका लागि चाहिने मसलाको खेलमा कुनै कमी भएन । पहिलो हाफमा मछिन्द्र बलियो देखियो । दोस्रो हाफमा आर्मीले लय समात्यो । गोलकिपर विकेश कुथुले चोट बोक्दै पहिलो हाफमै मैदान छाडे । आर्मीले मौका पनि पायो तर चाहिएको गोल भने गर्न सकेन । अन्तिम १४ मिनेट मछिन्द्रका डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ पनि खेल्न सकेनन् । तनावमा आर्मीका खेलाडीहरूको हतारो र मछिन्द्रका खेलाडीको समय बिताउने नाटक प्रस्टै झल्किन्थ्यो । खेलाडीदेखि अििफसियलहरू बारम्बार तनावमा आउँदा रेफ्री नवीन्द्र महर्जन ‘प्लेयर बक्स’ मै कार्ड देखाउन पुगे ।
आर्मीले सन्तोष तामाङको फ्रि–किकमा २२औं मिनेटमै अग्रता लिने अवसर पाएको थियो तर सिक्स यार्ड बक्समा खाली रहेका भरत खवास र जर्जप्रिन्स कार्कीले उपयोग गर्न सकेनन् ।
देवेन्द्र तामाङले ६१औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलमा आर्मीका सब्स्टिच्युट गोलकिपर विश्वास चौधरीले राम्रो बचाउ गरे । टंक बस्नेतको पासमा भरतको हेडरमा मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले पनि ६८ औं मिनेटमा राम्रो बचाउ गरिदिए । लगत्तै सुमन अर्यालको दिएको बललाई टंक पोस्टमा प्रहार गर्न चुके । त्यस्तै ८७ औं मिनेटमा सेन्टरब्याक पिटर सेगुनलाई उछिनेर पनि नवयुग श्रेष्ठ बल प्रहार गर्न चुक्दा आर्मीले बराबरी गर्ने अवसरसँगै उपाधि जित्ने मौका गुमायो ।
शनिबार अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै मछिन्द्र र आर्मीका खेलाडी ।
मनाङ र थ्रीस्टारका नाम चलेका खेलाडीलाई भित्र्याएर बलियो बनेको हो मछिन्द्र । पहिलोपल्ट ए डिभिजन लिगको टिम सम्हाल्दै च्याम्पियन भएका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले आर्मीविरुद्ध आफ्नो रणनीति सफल भएको बताए । ‘खेलमा सन्तुष्ट छु । योजनाअनुसार नै सफल भयौं,’ ३९ वर्षे उनले भने ।
‘आर्मी टिमवर्कमा यो लिगकै उत्कृष्ट टिम हो । उसले ४–५ वर्षयता एउटै टिमकै रूपमा खेलिरहेको छ । उसका खेलाडीलाई एकअर्काका सबै कुरा थाह छ । त्यसैले उनीहरूलाई हाम्रो जुन बलियो पक्ष हो त्यही उपयोग गर्ने भनेका थियौं,’ प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘गोल नखाने योजना थियो, किनभने गोल खानेबित्तिकै हामीले दुई गोल हान्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले गोल नखाई फ्रि–किक, कर्नरलाई सदुपयोग गर्ने योजना थियो । ‘डेड बल’ मा अगाडिदेखि गोल पनि गरिरहेको थियो । त्यही अनुसारको योजनामा आज गोल भयो । दोस्रो हाफमा त्यही गोललाई रक्षा गर्नु थियो । फरवार्डलाई अगाडि खेलाउने र पछाडि कम्प्याक्ट खेल्नु थियो किनभने १–० को जित भए पनि जित नै हो ।
त्यहीअनुसार सफल भयौं ।’ आर्मी कहाँ चुक्यो त ? उनी प्रतिद्वन्द्वीबारे बोले, ‘हामीभन्दा बढी दबाबमा आर्मी थियो । कारण उसलाई जित वा बराबरीमा अवसर थियो । हामीलाई खेल जित्नैपर्ने थियो । यस्तोमा जित्नका लागि खेल्नुपर्ने हुन्छ, गोल नै नखाए पनि च्याम्पियन हुन्छौं भन्ने हुन्छ । हामीलाई आर्मीलाई परेको यही दबाबको फाइदा भयो । आर्मीलाई पनि जित्नैपर्ने भएको भए खेलको नतिजा जे पनि हुनसक्थ्यो ।’ १० जित, २ बराबरी र १ हारको नतिजा निकालेका प्रशिक्षक कटुवालले उपाधि चुम्नुको आधारबारे भने, ‘राम्रो टिमहरूसँगको खेल जित्यौं । अन्त्यमा आर्मीलाई हरायौं, जो हामीभन्दा राम्रो थियो । थ्रीस्टारबाट अंक लियौं । मनाङसँग चुके पनि शीर्ष ६ का अरु सबै टिमसँग अंक लियौं । हामी तल्लो टिम (हिमालयन शेर्पा) सँग हारेको हो, शीर्ष टिमसँग हारेको भए लिग च्याम्पियन हुँदैन थियो ।’
गति बिर्सेको आर्मी
एउटा टिमको रूपमा लिगकै उत्कृष्ट देखिएको र निरन्तर तीव्र गतिमा आक्रामक फुटबल खेलिरहेको थियो आर्मीले । आर्मीले गर्ने क्रस खतरनाक हुने गर्थ्यो । शारीरिक रूपमा पनि आर्मीका खेलाडीहरू फिट थिए । तर, अघिल्ला १२ खेल जस्तै आक्रामक देखिएन आर्मी अन्तिम खेलमा ।
‘सोचेअनुरुप प्रदर्शन दिन सकेनौं,’ आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘दिइएको जिम्मेवारीमा खेलाडीहरू धेरै दबाबमा खेलेको अनुभूति भयो । बल सप्लाई नै हुन सकेन । त्यो नै कमजोरी बन्यो । २–३ पल्ट अवसर पाएका थियौं, क्लियर गरिदिए, गोल हुन सकेन ।’ उनको टिम दोस्रो चरणमा मनाङसँग १–० ले हारेको थियो । त्यसपछिको अपराजित यात्रालाई मछिन्द्रले १० खेलमा पूर्णविराम लगाइदियो ।
तीन वर्षयता आर्मी टिम सम्हालिरहेका प्रशिक्षक न्यौपानेले थपे, ‘मछिन्द्रले सोचेभन्दा धेरै नै राम्रो खेल्यो । मछिन्द्र सेटपिसमा धेरै राम्रो थियो, त्यो रोक्ने योजना थियो तर सकेनौं । फ्रि–किकमा विकेश अलि सुस्त (गोलको मुभ) भयो । तर, समग्र लिगमा केटाहरूले धेरै राम्रो खेलेको हो, इफोर्ट दिएको हो, चर्को दबाब दिने आधुनिक फुटबल खेलेको हो, मछिन्द्रविरुद्ध भने त्यसलाई कायम राख्न सकिएन ।’ घुँडाको चोटको कारण बाहिरिएका फरवार्ड दिनेश हेन्जनको स्थान लिएका टेकबहादुर बुढाथोकीको प्रदर्शन पनि आशाअनुरुप भएन ।
आफ्नो टिमको कमजोरीबारे उनले मुख खोले, ‘साइडबाट खेल्दै आक्रमण गर्ने भनेका थियौं, त्यो पहिलो हाफमा सफल भएन । दोस्रो हाफमा तीन डिफेन्स राखेर अगाडि बढ्यौं, क्रसिङ भयो, अवसरहरू पायौं तर गोल हुन सकेन ।’ नयाँ च्याम्पियन बन्ने अवसर गुमाएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘यो नेपाली सेना र मेरो लागि धेरै ठूलो मौका थियो । खेलाडीको रूपमा चार उपाधिपछि कोच भएर पनि जित्ने सपना थियो । तर, जे हुन्छ राम्रोका लागि हुन्छ भन्छन्, अर्कोपल्ट अझ राम्रो बनेर आउने छौं ।’
कप्तान भरत खवासले पनि आर्मीको फिनसिङमा सुरुबाटै देखिएको कमजोरी अन्तिम खेलमा पनि सुधारिन नसकेको बताए । ‘अघिल्ला १२ खेलमा जस्तै तीव्र गतिमा खेल्न पनि सकेनौं, आक्रामणमा पनि कमजोरी भयौं, फिनिसिङ कमजोर,’ उनले भने, ‘२०६३ सालमा पनि यस्तै भएको रहेछ, अन्तिम खेल बराबरी गरे पुग्ने थियो, आज त्यही दोहोरिँदा चित्त दुखिरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘यो नै अन्तिम होइन । धेरै लामो छ बाटो, धेरै लामो छ जिन्दगी, अब अर्को वर्ष अझ राम्रो भएर च्याम्पियनकै लागि आउँछौं ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:३७